I-Condo e-Riverview, ilungele ibhizinisi noma iholide - I-Airbnb
I-Condo e-Riverview, ilungele ibhizinisi noma iholide
Chaguanas, Chaguanas Borough Corporation, i-Trinidad ne-Tobago
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Rajendra
U-Rajendra Ungumbungazi ovelele
I-condo yomndeni itholakala emphakathini othule ongasedolobheni ongenasango imizuzu emihlanu empumalanga yeChaguanas, Central Trinidad. Ikhaya lakho elikude nekhaya lilindelwe ngamakamelo okulala amabili, ikhishi eligcwele, indawo yokuhlala neyokudlela, igumbi lokuwasha, i-inthanethi enesivinini esikhulu kanye nepaki yokudlala yomphakathi. Izindawo zokuzivocavoca nezamachibi ziyimizuzu emi-5 uma ushayela! Sikunikeza indawo ephephile elula ngenkathi ujabulela izindawo ezinhle zaseTrinidad noma uzinzile ohambweni lwakho lwebhizinisi!
I-master suite inendawo yayo yokugezela, amakhabethe kanye ne-TV kanye negumbi lokulala lezivakashi imibhede emibili engamawele, iphasishi lokugezela kanjalo namakhabethe kanye ne-TV. Ikhishi, amagumbi okudlela/okuhlala kuyipulani yaphansi evulekile. Kukhona indawo yokupaka eyanele kanye negceke elincane elingemuva. Sikude ngezinyathelo ezimbalwa ukusuka endaweni yokudlala okwabelwana ngayo; ilungele ukugijima okusheshayo noma imidlalo nezingane. I-condo iphakathi nendawo; kukho kokubili eningizimu nentshonalanga yesiqhingi okufinyeleleka kalula kuzo izizinda zabo zebhizinisi, izitolo ezinkulu, izingosi ze-eco nezindawo zamamuvi. I-Chuck E Cheese's, i-Movie Towne kanye nezindawo zokudlela ezidumile zikhangayo ezimbalwa uma uhamba ngemizuzu eyi-10. Ngaphandle kwethrafikhi ethile ngezikhathi zethu zokujaha (7 am - 9 am ) kanye (4pm - 5pm) ukungena nokuphuma e-Riverview kulula kakhulu.
Ukuze kube lula kuwe singatholakala ngocingo noma nini. Sizophendula ama-imeyili phakathi nehora phakathi nalawa mahora.
URajendra Ungumbungazi ovelele